Mike Adenuga Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha Africa Mike Adenuga Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Mike Adenuga Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNigerian Billionaire anozivikanwa zvikuru nezita rezita "John Bull".
Yedu vhezheni yeMike Adenuga's Biography Chokwadi, kusanganisira Nhau yake Yehudiki, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva pamazuva ake ehujaya. Isu tozoenderera mberi nekukuudza kuti Billionaire akave nemukurumbira sei.
Mike Adenuga Nyaya Yehudiki - Iyo Untold Biography Chokwadi.
Ongororo yeAdenuga's Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva iye padivi Aliko Dangote uye Femi Otedola mumwe wevanhu vakapfuma veForbes muAfrica. Zvakare, chokwadi chekuti ane hunyanzvi hwekuita bhizinesi.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveMike Adenuga's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Mike Adenuga Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Michael Adeniyi Agdolade Ishola Adenuga akazvarwa musi we29th waApril 1953 kuna amai vake, mushakabvu Omoba Juliana Oyindamola Adenuga (mukadzi bhizinesi) nababa vake vanononoka, Oloye Michael Agbolade Adenuga Sr (mudzidzisi wechikoro) muguta reIbadan, Oyo nyika yeNigeria.
Ndiye gotwe pavana vashanu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake; Omoba Juliana Oyindamola Adenuga uye mushakabvu Oloye Michael Agbolade Adenuga Sr.
Femi Otedola Upwere Hwenyaya Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Nyika yeNigeria yekuMadokero-Africa dzinza rinobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure sezvo vabereki vake vairarama hupenyu hwakareruka. Mhuri yaMike Adenuga yakabva kurudzi rwake rwemadzitateguru ndeyekumambo Ijebu.
Akakurira kwaakaberekerwa muOyo kwaakakurira pamwe nemukoma wake, Otunba Demola Adenuga, uye vatatu vakuru hanzvadzi; mushakabvu Esther Olusola Osunsade Adenuga, Akande Otunba, na Yetunde Adegbola.
Kukura muIbadan, Adenuga sevamwe vese vana veYoruba vaigona kukurumidza kupedzisa mabasa ake epamba mushure mekuchikoro voenda kunotsigira amai vake kunzvimbo yake yebhizinesi apo iye zvishoma nezvishoma achidzidza bhizinesi.
Nekuda kwekuita kwakabatikana kweguta reIbadan, Adenuga aive nemukana wekukura muhunyanzvi hwekubata bhizinesi mune ese makuru uye madiki madiki.
Mike Adenuga Dzidzo:
Maitiro aMike Adenuga ezuva nezuva kunzvimbo yebhizimusi yaamai vake haina kukanganisa zviitiko zvake zvedzidzo sezvo zviri zvakajairwa kuti mwana wese ane vabereki vanoita bhizinesi muIbadan kuenda kunzvimbo yebhizinesi mazuva ese kuti vadzidze bhizinesi vapedza chikoro.
Akaenda kuchikoro chegirama cheIbadan, Ibadan kwaakawana chikoro chake chesekondari ndokuenderera kuchikoro chepamusoro, Aiyetoro kwaakawana chitupa chake chepamusoro chikoro (HSC).
Munguva yemazuva ake echikoro chesekondari, Adenuga akawana ruzivo rwakakwana runogona kumubatsira kutanga bhizinesi diki vakazvimiririra.
Mike Adenuga Biography - Yepakutanga Basa Hupenyu:
Pasina nguva apedza chikoro chesekondari, mike Adenuga akaona kukosha kwekusimudzira ruzivo rwake mubhizinesi pamwe nekuzvimisikidza bhizinesi rake ega.
Kutenda kwake kwekuunganidza ruzivo rwakawanda mune bhizinesi kwakaita kuti anyore kuNorthwestern Oklahoma state yunivhesiti uye Pace yunivhesiti muNew york kwaakawana madhigirii ake mune bhizinesi manejimendi.
Mike Adenuga akapinda mubhizinesi rematekisi achifunda bhizinesi manejimendi pazvikoro zvataurwa.
Akatora bhizinesi iri kuitira kuti abatsire kubhadhara fundo yake pasina chikonzero chekuva mutoro kune chero yemhuri yake nekuti mari yake yaidhura.
Paakapedza kudzidza kwake kunze kwenyika, Mike Adenuga uyo aive nemakore makumi maviri nematanhatu akadzokera kuNigeria ndokutora bhizinesi raamai vake rekucheka matanda.
Akaitawo mamwe mabhizinesi anosanganisira kutengesa uye kugovera kweCoca-cola, lace, uye zvimwe zvigadzirwa zvemachira.
Mike Adenuga Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Mushure mekuwana madhigirii mubhizinesi manejimendi, Mike Adenuga akafunga kuenda mune yakazara-bhizinesi.
Iye akapinda mumafuta uye gasi izvo zvakamutungamira kuti agadzire kambani yake yemafuta; mafuta akasimbiswa ave kuzivikanwa seConoil. Akakurumidza kupinda mubhizimusi rekufona uye akapihwa rezinesi reGSM muna 1999.
Kukuodzwa mwoyo kukuru, rezinesi reGSM raakanga awana rakatorerwa zvinosiririsa mushure menguva yakati.
Kukanzurwa kwerezinesi rake reGSM kwakamisa bhizimusi rake rekufambisa mashoko kusvika pamwero mukuru kwazvo. Iyi yakava imwe yenguva dzinosuruvarisa munhoroondo yemubhizimisi akabudirira.
Mike Adenuga Biography - Kumuka Kune Mukurumbira Nhau:
Kutevera kubvisirwa rezinesi rake reGMM, Mike Adenuga akaenderera mberi nekumwe kuita bhizinesi aine pfungwa dzakanaka uye muna 2003 hurumende payakabata imwe okisheni, akagamuchira rezinesi reGSM kechipiri.
Ahmed Lawan Kuburitswa Nhau Plus Untold Biography Facts
Rezinesi rakamubatsira kuti asimbise zvakasimba kambani yake yeGlobacom telecommunication iyo inokurumidza kuve nemukurumbira, ichipararira munyika dzakasiyana dzekumadokero eAfrica senge; Benin, Ghana, uye Cote d'Ivoire.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Mike Adenuga achiri murume wechipiri akapfuma muAfrica uye achiri anoshamisa bhizinesi prodigy. Akagamuchira mibairo mizhinji kubva paakakwira mukurumbira.
Akapihwa iye Grand Commander weOrder yeNiger (GCON) naMutungamiri Goodluck Ebele Jonathan muna 2012.
Mores so, akagamuchira mimwe mibairo yakakurumbira yakadai semukuru weLegion of Honor pamwe ne100 akasarudzika uye Eminent Nigerians Centenary Awards muna 2018. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Mike Adenuga Hukama Hupenyu:
Nezve chimiro chake chehukama, Mike Adenuga akaroora panguva yekunyora. Adenuga ave achibatanidzwa munhevedzano yehukama nevamwe vakasiyana kubva paakasimuka mukurumbira.
Chinonyanya kuzivikanwa pakati pezvese muchato pakati pake naAmai Adefolake Emilia Adenuga (nee Marquis) uyo wakapa kuberekwa kwevana vake vatanhatu vanoti; Adetutu Oyindamola Emilia, Eniola, Folashade Adeniyi, Prince Michael, Tunde, naAbimbola.
Kuroora kwaAdenuga kuna Adefolake kwakapera mushure memamwe makore semhedzisiro yezvikonzero izvo zvakaramba zvisina kuzivikanwa kuruzhinji.
Mike Adenuga akaroora kuna Titi Joyce Adenuga panguva yekunyora. Kuroora kwake kuna Joyce kwakapa kuberekwa kwemwanasikana wavo akanaka, Belinda Olubunmi Ajoke anozivikanwa saBella.
Mike Adenuga akasangana nemukadzi wake titi kuDevcom Merchant Bank yanga ichitsvaga basa. Chiso chake chakabata moyo waAdenuga uye nhasi vakaroora vachifara.
Mike Adenuga parizvino ane vana vanomwe panguva yekunyora. Anoona kuti vana vake vese vakadzidza uye anodzidzawo nezvebhizinesi rake.
Mike Adenuga Hupenyu hwemhuri:
Mike Adenuga anobva kumhuri yepakati-yemhuri asati asimuka kuti ave weAfrica, wechipiri-akapfuma murume. Pano, tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaMike Adenuga:
Gare gare Michael Agbolade Adenuga Sr. aive baba vaMike Adenuga. Akange akadzidziswa kuSt Andrew's College, Oyo uye akazoenderera mberi achidzidza kuInstitute of Education, Exeter University kuEngland.
Paakadzokera kuIbadan, akazove mudzidzisi akashanda nesimba kusanganisa ruzivo muhupenyu hwevana vazhinji pamwe nemwanakomana wake Mike. Iye anozorasikirwa nehupenyu hwake kumaoko anotonhora pazuva rechinomwe raJune 7.
Nezve amai vaMike Adenuga:
akazononoka Juliana Oyindamola Adenuga (nee Onashilev weOkesopin, Ijebu Igbo) aive amai vaMike Adenuga. iye muzvinabhizimusi mukadzi anotsigira mhuri yake nekumhanyisa yake yemacheka.
Mushure mekufa kunosiririsa kwemurume wake, iye akatora basa rekuve muriritiri wemhuri uye akatarisira vana vake kubva pane zvaiitika zvakamuka kubva mubhizinesi rake. Akafa mwedzi mishoma mushure mekupemberera zuva rake rekuzvarwa muna 2005.
Nezve hama dzaMike Adenuga:
Mike Adenuga ane mukoma mukuru, Otunba Demola Adenuga, uye hanzvadzi nhatu vakuru; anonoka Esther Olusola Osunsade Adenuga, Akande Otunba, uye Yetunde Adegbola. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezvehama dzake dzambotaurwa.
Kure kure nemhuri yaMike Adenuga, sekuru nasekuru vake vaive David Oba Adenuga naEunice Banwo Adenuga avo vese vanobva kuIjebu Igbo. Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pasekuru vake amai, ambuya, babamunini, babamunini, babamunini, uye babamunini.
Mike Adenuga Hupenyu hweMunhu:
Kure kure nemike bhizinesi raAdenuga, tinokuunzira chokwadi chehunhu hwake kuti ubatsire kukupa iwe mufananidzo uzere wake. Kutanga, Mike Adenuga's Persona isanganiswa weTaurus.
Iye philanthropist ane zvido zvake uye zvido zvakagadzirirwa kubatsira varombo uye vasina rombo rakanaka. Iye zvakare mugari anoda nyika yake anogara achitsigira nyika yake mukuona kuti hupfumi hwayo hunokura.
Adenuga akange aratidza kufarira kwake mukusimudzira nyika yake paakapa madhora miriyoni imwe kumakondo makuru uye $ 1 kumurairidzi wavo kuhwina mukombe wenyika dze200,000.
Mike Adenuga Mararamiro:
Mike Adenuga akakosha mari inofungidzirwa yemadhora 9.4 bhiriyoni panguva yekunyora. Zvinoshamisa sevanhu vangati iye aive mutyairi wetekisi akakwira kusvika pakakwirira kudaro hupfumi.
Hupfumi hwake nhasi kuratidzwa kwekushanda nesimba uye kushingairira kwaakateedzera mune rake bhizinesi kuedza.
Mike Adenuga midziyo yakawanda uye yakapararira pasirese. kutanga, ane imba kuBanana Island muLagos, Nigeria. Imba yake yakakura kwazvo zvakakwana kugara mhuri yake pamwe nevamwe vanhu vanogona kumushanyira kumisangano yebhizinesi.
Mike Adenuga zvakare ane dzakateerana mhando dzakasiyana mhando dzemotokari muunganidzwa wake wemotokari. Mota dzinosanganisira; an Armored Bentley Mulsanne akakosha madhora 110.5 mamirioni, Mercedes-Maybach S-kirasi yaikosha madhora 72.1 mamirioni, Mercedes Benz AMG C63 yakakosha $ 24.3 mamirioni, uye Roll Royce Phantom inosvika madhora 151.6 mamirioni.
Mike Adenuga Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Mike Adenuga yehucheche nyaya uye biography, hezvino zvimwe zvishoma kana zvisingazivikanwe chokwadi pamusoro pabhizinesi iro iwe rinokubatsira iwe kuti utore mufananidzo wakazara wake.
Mike Adenuga Mukristu uye anosimudzira kutenda kwake muna Mwari waanomuona seari sosi yezvose zvaakange ave nazvo kuti zvive naye muhupenyu. Chivimbo chake chekunamata Mwari chakasimba zvekuti akasimudza nhengo dzese dzemhuri yake mukutenda kwechiKristu saye.
Mike Adenuga haana kunyora chero tattoo mumuviri wake. Nekuda kwerudzi rwake uye nehunhu hwake hwechitendero zvinopesana neinink tattoos pamutumbi, Mike Adenuga akashingairira kuita pfungwa dzake kuti dzisatyora tsika yake yemafambiro.
Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa pamusoro pekuti Mike Adenuga anonwa kana kuputa. Izvi zvinokonzeresa nenyaya yekuti anga asina kupa chero kubvunzurudza maererano neichi chikamu chehupenyu hwake.
Thanks for reading vedu Mike Adenuga Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi.
At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kurongeka tichiendesa iyo Biography yeAfrica Vanozivikanwa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingataridzike mune ino chinyorwa, ndapota isa mhinduro yako kana taura nesu!
Jeff Bezos Yenyaya Yehucheche Plus Untold Biography Facts